ပြောင်းလဲတိုင်းမပြောင်းလဲခြင်းများ – Thein Lin Aung's Blog
သင်မနေ့ညကအိပ်နေတုန်း တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုတစ်ခြားကမ္ဘာတစ်ခုကို ရွှေ့ပြောင်းတာခံရတယ်ဆိုပါတော့။ အဲ့ဒီ့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကလည်း အရင်ကမ္ဘာကဟာတွေနဲ့ ချွတ်စွပ်တူတယ်တဲ့။ Parallel universe တစ်ခုကို ရောက်သွားတယ်ပဲ ဆိုကြပါစို့။ အဲ့ဒီ့တော့ သင်ဒီနေ့မနက်အိပ်ရာကနိုးလာတဲ့အခါ သင့်အိပ်ရာ၊ အိမ်၊ မိသားစု၊ အပေါင်းအသင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေက အရင်ကမ္ဘာအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တစ်ခြားစကြာဝဋ္ဌာ ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ သတိပြုမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီးဒီမှာရှိတဲ့ မြေဆွဲအား၊ နယူတန်နိယာမ စတဲ့ ရူပဗေဒဥပဒေသတွေကလည်း အရင်အတိုင်းပဲ။ အဲ ဒါပေမယ့် ဒီစကြာဝဋ္ဌာမှာ သင်နေခဲ့တဲ့စကြာဝဋ္ဌာနဲ့မတူတဲ့ ခြွင်းချက်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့။ အကုန်အတူတူဖြစ်နေရင် ရွှေ့လိုက်တယ်လို့ ပြောလို့ဘယ်ရတော့မလဲ။ ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီ့ခြွင်းချက်ကို အသုံးချပြီး သင့်ကိုယ်သင် တစ်ခြားကမ္ဘာတစ်ခုရောက်နေတယ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်မလား။ တစ်နည်းပြောရရင် တစ်ခြားကမ္ဘာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
ကွာခြားချက်−၁: ဟင်းလင်းပြင်တွင် နေရာရွေ့သွားခြင်း
သင်အခုရောက်နေတဲ့ စကြာဝဋ္ဌာက အရင်စကြာဝဋ္ဌာကို ပုံတူပွားပြီး ဘေးချင်းယှဉ်ထားတာဆိုပါတော့။ အဲ့တာဆို သင်နေရာရွေ့သွားတာကို သိနိုင်မလား။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ ကြယ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ပြီး ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုက စကြာဝဋ္ဌာတစ်ခုလုံးကို ရွှေ့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာရော ကြယ်တွေအကုန်လုံးအတူတူရွေ့သွားပါပြီ။ သင့်ရဲ့ သိမြင်နိုင်စွမ်းက စကြာဝဋ္ဌာတစ်ခုအတွင်းမှာပဲရှိတဲ့အတွက် လက်ရှိစကြာဝဋ္ဌာကိုကျော်ပြီးလည်း ကြည့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒါဆို နေရာရွေ့သွားတာကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ စမ်းသပ်လို့ရနိုင်မလား။ အဖြေကတော့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိပ္ပံဥပဒေသတွေက နေရာကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲခြင်းမရှိလို့ပါပဲ။ ဥပမာ နာရီတစ်လုံးဆိုပါတော့။ နာရီထဲမှာပါတဲ့ စက်တွေနဲ့ အဲ့ဒီ့စက်တွေအခြေခံထားတဲ့ သိပ္ပံနိယာမတွေဟာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ့နာရီက မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ြဖစ်၊ အမေရိကန်မှာဖြစ်ြဖစ် အတူတူပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေသာတူညီရင် နေရာရွှေ့ခြင်းက ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဘာသက်ရောက်မှုမှ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကွာခြားချက်−၂: ဟင်းလင်းပြင်တွင် လှည့်ခြင်း
အခုတစ်ခါ​ နေရာရွှေ့တာမဟုတ်ပဲ စကြာဝဋ္ဌာကို ဒီဂရီတစ်ခု လှည့်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့။ ဥပမာစကြာဝဋ္ဌာကို ဇောက်ထိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့။ အဲ့ဒီ့အခါ သင်ဇောက်ထိုးဖြစ်သွားတာကို သိနိုင်မလား။ ဒီတစ်ခါလည်း မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ ချိန်သီးနာရီတစ်ခုကို ဇောက်ထိုးထားလိုက်ရင် အဲ့နာရီက အလုပ်လုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက ချိန်သီးနာရီက ကမ္ဘာ့မြေဆွဲအားကို မှီခိုပြီး အလုပ်လုပ်တာဖြစ်လို့ပါ။ ကမ္ဘာရော ချိန်သီးနာရီကိုရော ဇောက်ထိုးလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့အတိုင်းပဲ စကြာဝဋ္ဌာအပြင်ဘက်က သက်ရောက်မှုမပါပဲနဲ့ အတွင်းကနေ လှည့်သွားတာကို သိတဲ့ကိရိယာတီထွင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ စကြာဝဋ္ဌာကို လှည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုပဲ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ လည်နေတဲ့ဟာကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကွာခြားချက်−၃: တစ်သမတ်အလျင်ဖြင့် မျည်းဖြောင့်ရွေ့လျားခြင်း
သင်ဟာ အခုပဲ တစ်နာရီကို မိုင်ခြောက်သောင်းကျော်နဲ့ ရွေ့လျားနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့တာက ကမ္ဘာက နေကိုပတ်နေတဲ့အလျင်ဖြစ်လို့ပါ။ ကမ္ဘာရဲ့အလျင်ကို နေနဲ့ တစ်ခြား ကြယ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေနေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ့အလျင်ကို သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကြားဖူးမှာပါ၊ အလျင်က နှိုင်းရသဘောကိုဆောင်ပါတယ်။ ကားကို တစ်နာရီမိုင် (၃၀)နဲ့ မောင်းတယ်ဆိုတာ မြေပြင်နဲ့ နှိုင်းပြီးပြောတာပါ။ ပကတိအလျင်ဆိုတာမရှိသလို ပကတိအလျင်ပေါ်ကိုမူတည်တဲ့ သိပ္ပံဥပဒေသလဲ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပကတိအလျင်ကို တိုင်းတာတဲ့စက်တီထွင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကားစီးနေတုန်း အပြင်ကိုမကြည့်ရင် ကားက တစ်သမတ်အလျင်နဲ့ မောင်းနေတဲ့အခါ ရွေ့နေတယ်လို့ မထင်ရပါဘူး။ ကားအရှိန်တင်တာတို့၊ ဘရိတ်အုပ်တာတို့လုပ်တဲ့အခါမှသာ သိသာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလျင် ဘယ်လောက်ပဲ ရှိရှိ၊ တစ်သမတ်ဖြစ်နေသရွေ့ ရွေ့လျားမှုကို ထောက်လှမ်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကွာခြားချက်−၄: တစ်သမတ်နှုန်းဖြင့် လည်ခြင်း
ဒီနေရာမှာ ကွာခြားချက်−၂ နဲ့ မတူတာက ၂ မှာတုန်းက လှည့်ပြီးရင် ရပ်သွားပါတယ်။ အခုက ကမ္ဘာလည်သလို ပုံမှန်နှုန်းနဲ့ လည်နေတာကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲ့ဒီ့တော့ အခုစကြာဝဋ္ဌာက လည်နေလားဆိုတာ ပြင်ပအကူအညီမပါပဲ သိနိုင်သလား။ ဒီတစ်ခါတော့ သိနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုက တစ်သမတ်နှုန်းနဲ့ လည်တာက တစ်သမတ်နှုန်းနဲ့ ရွေ့တာနဲ့ မတူတာပါပဲ။ လည်နေတဲ့အရာတစ်ခုမှာ ရပ်နေတုန်းကမရှိတဲ့ အားတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ကျောက်ခဲကို ကြိုးနဲ့ချည်ပြီး လှည့်ရင် ကြိုးတင်းအားကို ဗဟိုခွာအားလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဗဟိုခွာအား၊ coriolis အား စတာတွေက လည်နေတဲ့စနစ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ အားအယောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အားအယောင်လို့ခေါ်ရတာက လည်နေတုန်းပဲ ပေါ်လာပြီး လည်တာရပ်သွားရင် ပျောက်သွားလို့ပါ။ ဒီအားတွေကြောင့် လည်နေတဲ့အဝိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာ ဗဟိုကနေ အပြင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက်သွားရင် လွယ်လွယ်လျှောက်လို့မရတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုကမ္ဘာလည်နေတာကျတော့ ဘာလို့မသိသာရတာလဲ။ သီအိုရီအရတော့ အီကွေတာကနေ ဝင်ရိုးစွန်းကို တည့်တည့် လမ်းလျှောက်သွားရင် ဘေးတိုက်တွန်းတဲ့ အားတစ်ခုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာရဲ့ ကြီးမားမှုကြောင့် လမ်းလျှောက်လို့ဖြစ်တဲ့ ဘေးတိုက်အားက အလွန်သေးငယ်ပါတယ်။ လူအတွက် မသိသာပေမယ့် ကမ္ဘာ့လည်နှုန်းကို အာရုံခံအားကောင်းတဲ့ ကိရိယာတွေနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာပဲ တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ ဒီအားသဘောတရားတွေကို အသုံးပြုပြီး အခုရောက်နေတဲ့နေရာက ပကတိနှုန်း ဘယ်လောက်နဲ့ လည်နေလဲဆိုတာ တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။
ကာတွန်းစာအုပ်ထဲကလို အရာဝတ္ထုတွေကို သေးငယ်စေတဲ့ရောင်ခြည်နဲ့ စကြာဝဋ္ဌာကြီးကို ပစ်လိုက်ရင် အရာအားလုံး စကေးတူကျုံ့သွားတဲ့အခါ အထဲကလူက ကျုံ့သွားမှန်းသိနိုင်မလား။ သာမန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ သိနိုင်မယ်လို့ မထင်ရပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခြေခံစံတိုင်းတာချက်တွေပါ ကျုံ့သွားတဲ့အခါ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတိုင်းစရာမရှိတော့လို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သဘာဝတရားက ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကိန်းသေတွေ (ဥပမာ အလင်းအလျင်) က စကေးကိုလိုက်ပြီး မပြောင်းလဲပါဘူး။ နောက်ပြီး ထုထည်တစ်ခုရှိတဲ့ ဘောလုံးထဲက အက်တမ်တွေထုတ်လွှတ်တဲ့ အလင်းလှိုင်းအလျားက ထုထည်ငါးဆရှိတဲ့ ဘောလုံးအတွက် အလင်းလှိုင်းအလျားနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒီလှိုင်းအလျားကို စံထားပြီးတိုင်းတာရင် အရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုရှိလားဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးသိသာတာက အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ ခိုင်မာမှုက အရွယ်အစားနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးမကျတဲ့အတွက် ပိုကြီးလာရင် ပိုခိုင်လာမယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်က သူ့အလေးချိန်ထက် အဆတစ်ထောင်အထိလေးတဲ့ အရာကို မနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ပုရွက်ဆိတ်ကို အဆတစ်ထောင် ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုယ်သူတောင် နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်က ကမ္ဘာ့အရွယ်အကြီးဆုံးသတ္တဝါတွေ ရေထဲမှာရှိနေခြင်းရဲ့ အကြောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့တော့ သင့်ဘေးက ပုရွက်ဆိတ်တွေ ရုတ်တရက်လဲသေကုန်တာတွေ့ရင် စကေးချဲ့ရောင်ခြည်နဲ့ ပစ်တာခံလိုက်ရပြီလို့ မှတ်လိုက်ပေတော့။ အဲ့ဒီ့အချိန်ကျရင် အိမ်တွေလဲ သူ့ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်ကို မထမ်းနိုင်ပဲ ပြိုကျကုန်လိမ့်မယ်။
မှန်ထဲကပုံရိပ်တွေက တစ်ခြားစကြာဝဋ္ဌာတစ်ခုဖြစ်နေမယ်လို့ စဉ်းစားဖူးပါသလား။ မှန်ထဲကလူကလဲ သင့်ကိုပြန်ကြည့်ပြီး အခြားတစ်ဖက်ကလူလို့ စဉ်းစားနေမှာပေါ့။ တကယ်လို့ မှန်ထဲကလူနဲ့ အပြင်ကလူကို ရုတ်တရက်လဲလိုက်ရင် အဲ့လူက မှန်ကမ္ဘာထဲရောက်သွားမှန်း သတိထားမိမလား။ မှန်ကမ္ဘာထဲမှာဆို ဘယ်ကညာဖြစ်၊ နာရီတွေ နောက်ပြန်လည်ပြီး စာတွေလည်း မှန်စာတွေဖြစ်ကုန်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် နာရီနဲ့ စာတွေကနေလာတဲ့ အလင်းတန်းတွေကို လက်ခံစိစစ်ပေးတဲ့ ဦးနှောက်ထဲက နူရွန်တွေနဲ့ လျှပ်စီးဖြစ်ပေါ်မှုတွေကလဲ အလားတူ မှန်ပုံရိပ်တွေဖြစ်ကုန်တဲ့အတွက် သင့်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အသိဉာဏ်တွေကလည်း မှန်ပုံရိပ်တွေဖြစ်ကုန်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ လူရဲ့ နှလုံးကလဲ ဘယ်လက်ကနေ ညာဘက်ရောက်သွားမှာပါ။ သတ္တဝါတွေရဲ့ ခန္တာကိုယ်ထဲက ဘယ်ညာထပ်တူမညီတဲ့ ပရိုတင်းတွေလဲ ပြောင်းပြန်တွေဖြစ်ကုန်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နဲ့ ညာဆိုတာ လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို သိပ္ပံဥပဒေသတစ်ခုကိုအသုံးချပြီးတော့ရော ဘယ်နဲ့ညာကို ခွဲခြားနိုင်မလား။ ရူပဗေဒမှာ လိမ်အား၊ လည်နှုန်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရဲ့လားရာ စတဲ့အရာတွေမှာ right-hand rule ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ rule က လူတွေသတ်မှတ်ထားတာသာဖြစ်ပြီး သဘာဝတရားရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အခြေခံအမှုန်တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ beta decay or weak decay ကို အသုံးချပြီး ဘယ်ညာခွဲနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ဆန့်ကျင်အမှုန် (antimatter) ကို ထည့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ခွဲလို့မရပြန်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သဘာဝနိယာမတွေက ဘယ်၊ညာ တစ်ဖက်ဖက်ကိုလိုက်ပြီး တည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်။
စကြာဝဋ္ဌာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ အက်တမ်တွေအားလုံးက ပရိုတွန်၊ နယူထရွန်၊ အီလက်ထရွန်စတဲ့ အခြေခံအမှုန်တွေနဲ့ ဖွဲစည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အက်တမ်အမျိုးတူရင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကာဘွန်အက်တမ်တစ်လုံးကို နောက်အမျိုးတူကာဘွန်အက်တမ်တစ်လုံးနဲ့ အစားထိုးလိုက်ရင် ဘာမှ ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ အက်တမ်တည်မြဲမှုနိယာမကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ကရှိသမျှအရာအားလုံးက အရင်တည်းကရှိတဲ့အက်တမ်အများစုနဲ့ပဲ လှည့်ပတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်မှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတစ်ခုက လူတစ်ယောက်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အက်တမ်အကုန်လုံးကို အစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့လူက အတူတူပဲလားဆိုတာပါ။ ဒီမေးခွန်းက ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို ကွမ်တမ်နည်းစနစ်အရ အဝေးကိုရုတ်ချည်းပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အခါ အရေးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အက်တမ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကို မိတ္တူကူးယူပြီးပွားလို့ရသလား၊ လူနှစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ အက်တမ်တွေကို လဲလှယ်လို့ရသလား ဆိုတာလဲ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။
စကြာဝဋ္ဌာထဲမှာ အချိန်ထပ်ဖြစ်စရာမရှိတော့ရင် အချိန်ကနောက်ပြန်လည်နိုင်သလား။ အခုရော အချိန်က ရှေ့ကိုသွားနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသေချာသိနိုင်မလဲ။ အချိန်နောက်ပြန်သွားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလို့ ထင်စရာရှိပါတယ်။ ကျကွဲသွားတဲ့ဖန်ခွက်က သူ့ဘာသာသူ ပြန်မဆက်သွားပါဘူး။ ငယ်ရာက ကြီးတာပဲရှိသလို ရုပ်ရှင်မှာလည်း ရှေ့နောက်ဖြစ်စဉ်သာရှိပြီး ဇာတ်သိမ်းခန်းက စမလာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတာတစ်ခုက သိပ္ပံနိယာမတွေက အချိန်ရဲ့ ဦးတည်ရာကို မှီခိုခြင်းမရှိပါဘူး။ ဥပမာ ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာနိယာမတွေက ပြဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းတွေမှာ အချိန်ကို နောက်ဆုံးကပြန်စရင်လည်း မှန်နေပါတယ်။ ဂြိုလ်တွေလက်ရှိရွေ့နေတဲ့ အလျင်တွေကို ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်ရင် ဂြိုလ်တွေက သူ့လာရာလမ်းအတိုင်း ပြန်ရွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကို နောက်ပြန်ပြသလိုပါပဲ။ ရွေ့လျားမှုနိယာမတွေအတွက် အချိန်နောက်ပြန်သွားခြင်းဟာ လမ်းကြောင်းနောက်ပြန်ဖြစ်သွားခြင်းသာဖြစ်ပြီး မှားတာ၊ မှန်တာ မရှိပါဘူး။ ကျန်တဲ့နိယာမတွေကလည်း အချိန်နောက်ပြန်သွားတာကို တားဆီးခြင်းမရှိပါဘူး။ ခြွင်းချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ သာမိုဒိုင်းနမစ်ဒုတိယနိယာမက entropy လို့ခေါ်တဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်းကို ညွှန်ပြတဲ့ကိန်းဟာ အချိန်နဲ့အမျှတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အချိန်သာနောက်ပြန်သွားရင် ဒီနိယာမက မှားယွင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိမှာ အချိန်က စကြာဝဋ္ဌာပြန့်ကားခြင်းကြောင့် ဟင်းလင်းပြင်နဲ့အတူ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုလို့ အဆိုပြုထားတာလဲရှိပါတယ်။
ပြောင်းတာတွေရော မပြောင်းတာတွေရော နည်းနည်းတော့ ရှုပ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို ဥပဒေသတွေရဲ့ အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး မပြောင်းလဲတာကို invarient (သို့) symmetry လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရူပဗေဒရဲ့ symmetry ဆိုတာ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြောင်းလဲလိုက်ပေမယ့် မူလအခြေအနေပဲ ပြန်ရောက်တာကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်က ကွာခြားချက်တွေကို အောက်မှာပြန်ရေးပြထားပါတယ်။
ဟင်းလင်းပြင်တွင် နေရာရွေ့သွားခြင်း Translation in space Yes
ဟင်းလင်းပြင်တွင် လှည့်ခြင်း Rotation in fixed angle Yes
တစ်သမတ်အလျင်ဖြင့် မျည်းဖြောင့်ရွေ့လျားခြင်း Uniform velocity in straight line Yes
တစ်သမတ်နှုန်းဖြင့် လည်ခြင်း Rotation in fixed rate No
စကေးချုံ့၊ခြဲ့သွားခြင်း Scaling No
မှန်ပုံရိပ်ဖြစ်သွားခြင်း Mirror reflection Yes?
တူညီသောအက်တမ်များလဲလှယ်ခြင်း Swapping atoms Yes
အချိန်နောက်ပြန်လည်ခြင်း Reversal in time No?
ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာ ရွေ့တာ၊ လှည့်တာကြောင့် မပြောင်းလဲတဲ့ symmetry ကိုအသုံးချပြီး ဥပဒေသတွေ လေ့လာတွက်ချက်ရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ သခင်္ျာနည်းစနစ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နည်းစနစ်ကိုတော့ Vector analysis လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Hollow Earth Gravitation
2 thoughts on “ပြောင်းလဲတိုင်းမပြောင်းလဲခြင်းများ”
Pingback: အဟုန်တည်မြဲခြင်းနိယာမ – Thein Lin Aung's blog
Pingback: Vectors – Thein Lin Aung's blog